Tsy amin’ny fifidianana ihany… | NewsMada
Tsy amin’ny fifidianana ihany…
Hazakazaka izao, misy ny arahin-tosika. Mandeha ny fotoana. Tsy inona fa ny amin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika amin’ny 7 novambra. Mbola mampanontany tena sy mampanongo tena ny maro ny fahamaroan’ny kandidà.
Misy vinam-piarahamonina na fandaharanasa 36 samihafa, araka ny karazany, ary samy hafa fa tsy mitovy izany? Ho hita eo ny amin’izay, na efa manomboka hita sompirana aza izay efa niomana ela, tapa-kevitra, vonona, sahy, matoky tena…
Amin’izany, tsy ilaozan’izay mitsapatsapa, miandriandry… Izay no mahatonga ny resabe hoe: misy ny tsy manao afa-tsy handrava vato. Mitetika sy be kajikajy hivarotra izany amin’izay kandidà hiatrika ny fifidianana fihodinana faharoa?
Ao ny mitady vola fotsiny izao: mampanantena ny mpanome vola hanome vahana azy raha voafidy eo izy. Nefa fantatra izao fa tsy ho voafidy tsinona. Ny ampahan’ny vola azo ihany no ihetsiketsahana amin’ny fampielezan-kevitra, dia izay.
Kajikajy amin’ny vola avokoa izany, na paipaika ihany koa: mitifi-danitra sitrany ahay mahavoa tendrombohitra? Na mirotsaka ho filohan’ny Repoblika, sitrany ahay voatendry ho minisitra. Izay ny ahazoana sy andaniana volabe toy izao?
Ny mahavalalanina sy mahafanina, tsy izay fahazoana vola tsy fanta-piaviana na tsy ampahafantarina ihany fa ny hoe: tsy afa-manao na inona na inona ho an’ny firenena sy ny vahoaka ve ny tena, raha tsy filoha… faratampony?
Raha mba marobe toy izao, hono, ny tsy miroa fo mitady vola atsy sy aroa hanasoavana ny vahoaka: hananganana fotodrafitrasa madinika, hamoronana asa… Eny, na eo anivon’ny fokontany na kaominina misy ny tena ihany aza.
Tsy misy ny mpanome vola raha tsy amin’ny fifidianana toy izao? Fivarotan-tena, fivarotana tanindrazana… ilàm-pitandremana. Mba foto-kevitra sy vinam-piarahamonina ary fandaharanasa amin’izay no mampihazakazaka?
Mba tsy amin’ny fifidianana ihany vao mirongatra avokoa ny tia tanindrazana fa mandavantaona any anivon’ny vahoaka ifotony. “Tsy mamafa ny olana ny fifidianana”, hoy ny Praiminisitra teo aloha frantsay, i Jean-Pierre Raffarin, izay.